Location: musha » Kutumira » Nhau dzeWaya » Mamirioni gumi nemaviri Mabasa Akarasika Kuti Otomatiki muEurope Pakazosvika 12
Huwandu hwekuchembera, kuwedzera kwemakwikwi, uye kugadzirwa kwakarasika nekuda kwedenda kuri kusimudzira kutorwa kweautomation muEurope. Forrester inofungidzira kuti 34% yemabasa eEurope ari panjodzi uye mamirioni gumi nemaviri mabasa acharasika kune otomatiki muEurope-12 (France, Germany, Italy, Spain, uye UK) panosvika 5.
Nepo denda richiramba richimanikidza mabhizinesi eEurope kuti aise mari yakawandisa uye nekukurumidza mune otomatiki, handicho chega chinhu chiri kukonzera kurasikirwa kwemabasa. Sekureva kweForrester's Future of Jobs Forecast, 2020 kusvika 2040 (Europe-5), vashandi vane simba shoma rekutengesa ndivo vari panjodzi yekutamiswa, kunyanya munyika umo vazhinji vari pasi pezvibvumirano zvebasa zvenguva dzose, kusanganisira zvibvumirano zveawa-zero muUK, izvo zvisingadi maawa ekushanda akavimbiswa, kana mabasa enguva pfupi ane mihoro yakaderera, se "mini-mabasa" muGermany.
Kurasikirwa nebasa kune otomatiki kunozokanganisa vashandi vekuEurope mukutengesa, zvitoro, zvekufambisa, pekugara, masevhisi ezvekudya, uye kuzorora uye kugamuchira vaenzi pamwero mukuru. Simba reGreen uye otomatiki, zvisinei, zvichagadzira 9 miriyoni mabasa matsva muEurope-5 panosvika 2040, kunyanya musimba rakachena, zvivakwa zvakachena, uye maguta akangwara.
• Kuchembera kwevanhu muEurope ibhomba renguva. Panosvika 2050, Europe-5 inenge iine 30 miriyoni vashoma vezera rekushanda pane 2020. Mabhizinesi ekuEurope anofanirwa kumbundira otomatiki kubatsira kuzadza maburi evashandi vachembera.
• Kuwedzera zvibereko uye kuvandudza basa riri kure chinhu chinonyanya kukosha. Nyika dzinosanganisira France, Germany, Italy, neSpain - uko indasitiri, kuvaka, uye kurima zvinopa chikamu chakakura chehupfumi hwavo - vari kuisa mari yakawanda mumaindasitiri otomatiki kuti vawedzere goho.
• Tsanangudzo yakasimba yebasa iri kutanga kuparara. Panzvimbo pekutarisa otomatiki sechinzvimbo chebasa, masangano eEuropean ari kutanga kuongorora vanhu uye hunyanzvi hwemuchina pakuita mabasa akasiyana, anosanganisira maneja, nekuvandudza masisitimu eHR kana kugadzira zvirongwa zvekudzidzisa. Nepo mabasa acharasika, mabasa achawanwawo nekushandurwa sezvo hunyanzvi hutsva hunodiwa.
• Mabasa epakati pehunyanzvi ane mabasa akapfava, enguva dzose ndiwo ari panjodzi huru kubva kune otomatiki. Mabasa enguva dzose anoumba 38% yevashandi muGermany, 34% yevashandi muFrance, uye 31% yevashandi muUK; 49 miriyoni mabasa muEurope-5 ari panjodzi kubva kune otomatiki. Nekuda kweizvozvo, masangano eEuropean anodyara mari mumabasa akaderera-kabhoni uye nekuvaka hunyanzvi hwevashandi. Unyanzvi hwakapfava hwakadai sekudzidzira kushingaira, kusimba, kushivirira kushushikana, uye kuchinjika - chimwe chinhu marobhoti asingazivikanwe - anozadzisa mabasa otomatiki evashandi uye anodiwa zvakanyanya.
kushandisa michina Europe Speini